Kuza ezinye izinguquko ku-SABC 3 | News24
Cape Town – Isiteshi sikamabonakude uSABC 3, kulindeleke ukuthi simemezele izinguquko ezintsha ezizoqala ukusebenza kusukela ngomhlaka-1 ku-Ephreli.
Ngokwemithombo engaphakathi, uSABC 3 uzomemezela ukuthi uzoshintsha isikhathi okudlala ngaso inqwaba yezinhlelo zawo.
Kulindeleke nokuthi lesi siteshi sethule inqwaba yezinhlelo ezintsha ezididiyelwe kuleli – njengoba sihlela nokuthi siqede ukuphindaphindwa kwezinhlelo ezindala ngezikhathi zasebusuku ukuze kunciphe nezindleko zokusakaza izinhlelo eziphindwayo.
Nazi ezinye zezinguquko ezizokwenzeka kusuka ngo-Ephreli kuSABC 3:
- Kusukela ngomhlaka-17 ku-Ephreli i-Expresso kulindeleke ukuba ingabe isaqala ngo-6:00, kodwa iqale ngo-6:30 njengoba sekuzoba nohlelo lwezingane kusukela ngo-6:00.
- Kusukela ngomhlaka-3 ku-Ephreli angeke zisaphindwa izinhlelo ebeziphindwa kusukela ngo-09:00 njengoba sekuzophindwa uhlelo lwezingxoxo, iReal Talk with Anele.
- Umdlalo owuchungechunge, iMuvhango, usuzobuye uphindwe kuSABC 3 ngo-11:30 phakathi nezinsuku ngemuva kokuthi wakhishwa ngoJulayi kunyaka ka-2016.
- Uhlelo lwezingxoxo i-Afternoon Express seluzoqala ngesikhathi olwaluvele luqala ngaso ngaphambilini u-16:00 kusukela ngomhlaka-3 ku-Ephreli.
- I-Real Talk with Anele yona isizoqala ngo-17:00 njengoba lesi siteshi sikholwa ukuthi izokwazi ukuthi ihehe abanye ababukeli abaningi.
- Izindaba eziqala ngo-18:30 manje sezizoqala ngo-18:00 kusukela ngo-Ephreli.
- Lokhu kusho ukuthi umdlalo owuchungechunge waseMelika, iThe Bold and the Beautiful usuzoqala ngo-18:30 phakathi nezinsuku kusukela ngomhlaka-3 ku-Ephreli.
- I-Trending SA isizoqala ngo-21:30 esikhundleni sika-22:00. Ngaphezu kwalokho lolu hlelo angeke lusaphinda ngo-12:00 emini njengoba bekujwayelekile.
- Kusukela ngomhlaka-6 ku-Ephreli, iTop Billing isizoqala ngo-20:30, hhayi ngo-20:00 njengoba bekujwayelekile.
- ISpecial Assignment angeke isadlala ngo-12:30 ngoLwesithathu, kodwa isizodlala ngoMsombuluko ngo-21:00.
- Ngaphezu kwalokho kuphinde kube nezindaba ezimbi kubalandeli bohlelo lwezingxoxo ngezindaba ezisematheni, i-Interface olungena ngeSonto, ngo-21:30 njengoba kuzobe sekungolokogcina ngci ngomhlaka-2 ku-Ephreli. Endaweni yayo kuzoqala iCelebville ngeSonto ngomhlaka-8 ku-Ephreli.